Posted by ဆိုးသွမ်း at 1:15 PM
အင်း ... သမီးလေး မွေးထားသဗျ ... ဘာ ပြောရမှန်း ကို မသိတော့ပါဘူး ... :P လေတယ် ... :P
အစ်ကိုရေ ... သတိသာ ထားတော့ .. ကိုစိုးထက်ကြီးလို
သမီးတော့ မွေးမထားနဲ့ :P ...
အမြန်ဆုံး ပြုပြင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းရတော့မှာပေါ့ဗျာ..။ ယဉ်ကျေးမှုတွေ ပျောက်ကုန်ရင် မကောင်းပါဘူးနော...။
မောင့်ကို သမီးလေးဘဲ အရင်မွေးမယ်လို့ ပြောဘူးတယ်နော်၊ သူများယောင်လို့ လိုက်မပေါင်နဲ့၊ အဲလိုမဖြစ်အောင် နှစ်ယောက်ကြိုးစားကြမယ်နော်၊
No culture has such things.. It's just the dark side of the goblization. Saddddd........ I think more is coming on the way..:( :( :( :(
Right.., What can i say!!
I was grew up in West country and I cant even imagine to put myself to conduct like that in Public.
It's seen like they dance in strip club, wearing only knicker and showing the flesh.
I wonder how their parents will feel after watching the footage.., It's pathetic!!
I agree we are in 21 century and we can follow the fashion style but there limit and not out of the line. No one will maintained to our tradition and culture unless we should control morally.
I feel sad and so shameful to watch it behalf of them.
တော်တော်ကြီး ဆိုးဝါးတာပဲ ဒါက မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကို ခုတုံးလုပ်သလိုပဲ ။ မပြောဘူးဆိုပေမယ့် ပြောရအုံးမယ် အဲ့လောက်ကနေတဲ့ မိန်းခလေးကတော့ မိန်းမကောင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ် ။ ၀တ်ထားတာက နိုင်ငံခြားသူတွေထက်တောင်ဆိုးနေတယ် ။
Ko Soe Thwan, u know I live in the west but I never saw this dance in the public. It's seen like they dance in strip club.That's horrible. We should control these kind of people.
video ကည့်ပြီး နာရင်တုန်ပြီး ညအိပ်မရရင် ဆိုးသွမ်းရေ နင့်ကြောင့်ဟ.... ဟီး..ဟီး
OHHHHHHHHH MYYYYYY GODDDDDDDDD!!!!!!!! စိတ်ဆင်းရဲလိုက်တာ။ သံစဉ်ကဂျပန်လူမျိုးတွေ၊ တခြားနိုင်ငံခြားသားတွေကိုမြန်မာမိန်းကလေးတွေဘယ်လိုအိနြေ္ဒရှိကြောင်း၊
အခုတော့ ညာသလိုဖြစ်နေပြီ။ ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ။ အမြင်မတော်လိုက်တာ။
မရောက်တာကြာလို့ ဝင်ကြည့်တော့မှ ဒီပို့စ်နဲ့ တည့်တည့်တိုးတယ်.. တော်တော်ကို အမြင်မတော်တာပါ...
လူ ဒီလောက်စည်တဲ့ သင်္ကြန်လိုရက်မျိုးမှာ အဲ့လိုမျိုးတောင် ကနိုင်တယ်ဆိုတော့ တော်တော်ဆိုးလို့ပေါ့.. နော့..
မြန်မာအမျိုးသမီးထုကိုယ်စား ရှက်မိပါရဲ့.. အဲ့ဒါထက်စာရင် ဒီမှာ နိုင်ငံခြားသူနဲ့ မခြား ဝတ်နေစားနေတဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီးတွေကမှ ကြည့်ရတာ အမြင်တော်ဦးမယ်.. ဒီလိုကတယ်ဆိုတာ ရန်ကုန်ကရောက်တာမကြာသေးတဲ့ အစ်မပြောတော့ မယုံဘူး.. မြန်မာမိန်းကလေးတွေ အဲ့လောက်တော့ မဆိုးဝါးနိုင်ပါဘူးလေလို့ ထင်ထားတာ.. လက်တွေ့ကြည့်ရမှပဲ သူပြောတာ နည်းတောင်နည်းနေသေးတယ် ဆိုပြီး ဖြစ်သွားတယ်.. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တတ်နိုင်သလောက်တော့ ကိုယ့်ရိုးရာနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကို ထိန်းသိမ်းရမှာပဲလေ.. =)